Fardaha Noti waa degel ku siineysay talooyin iyo tusaalooyin tan iyo sanadkii 2011 si aad ugu daryeeli karto sineyntaada sida ugu macquulsan: kalgacal, ixtiraam iyo wax walboo ay tahay inuu raaco qof kasta oo fardooley ah ama taageere xayawaankan ah. cudurada u gaarka ah ee fardaha ama noocyada kala duwan ee jira.
Kooxda tifaftirka ee Noti Caballos waxay ka kooban yihiin dad jecel xayawaanadan, waxayna khuburo ku yihiin. Haddii aad jeclaan lahayd inaad nalashaqayso, buuxi foomka soo socda si aan ula xiriirno.
Laga soo bilaabo yaraanteydii waxaan gartay in farduhu yihiin kuwa noolaha cajiibka ah ee aad aduunka kaga arki karto aragti kale illaa laga barto wax badan oo ku saabsan dhaqankooda. Dunida sinaan la'aantu waa mid soo jiidasho leh sida dunida aadamiga oo inbadan oo kamid ahi waxay ku siiyaan jacayl, shirkad, daacadnimo wixii intaas ka sarreeyana waxay ku baraan inay daqiiqado badan neefta kaa qaadi karaan.
Farduhu waxay noloshayda qayb ka ahaayeen muddo dheer. Tan iyo markii aan ahaa tadlele waxaan la yaabi jiray sawirada, iyo xitaa intaa ka sii badan. Waxaan u arkaa iyaga xayawaan la yaab leh, aad u qurux badan, laakiin sidoo kale aad u caqli badan.
Gabadh faras labis ah Hadda ka shaqeeya kormeerka iyo labiska fardaha Celta Equestrian Equestrian Social Center, ee Hijos de Castro y Lorenzo Livestock. Waxaan haystaa isbaanish-carab labadoodaba waxaan labaduba kawada shaqeyneynaa fanka labiska. Wali ma aanan isticmaalin sabab waxaana horeyba u jeclaa fardaha. Mid ka mid ah riyadeyda ugu weyn ayaa ah inaan awood u yeesho inaan u gudbiyo macluumaadkeyga dhabta ah akhristayaasheyda kuwaas oo ka caawin doona inay sare u qaadaan waaya-aragnimadooda xayawaanadan cajiibka ah, waana sababta aan sidoo kale u leeyahay degel loo siman yahay
Xamaasad badan oo ku saabsan fardo laga bilaabo da 'yar. Waan jeclahay barashada iyo ka sheekeynta waxyaalo cusub oo ku saabsan xayawaanadan, sidaas sharaf iyo haybad leh. Waana haddii aad si wanaagsan u daryeesho, haddii aad siiso wax kasta oo ay u baahan yihiin, waxaad heli doontaa wax badan oo soocelin ah. Kaliya waa inaad ku dulqaadataa fardaha, maxaa yeelay waxay soo saari karaan waxa ugu fiican mid walba.